Tor Browser 5.0, iro rekuvanzika browser | Linux Vakapindwa muropa
Tor Browser 5.0, iro rekuvanzika browser
Iyo Tor browser inovimbisa kuvanzika uye kubhurawuza kwakachengeteka, nhasi tiri kuzotaura zvishoma nezve maficha ayo
Mazuva apfuura Isu tataura nezve kuvhurwa kwekuparadzirwa kweMiswe, kugoverwa kweGNU / Linux kunoenderana nekuchengetedzwa kwenetiweki. Muchikamu chino takaratidza kuiswa kweyekuvandudzwa kweakakurumbira Tor browser. bhurawuza rinozivikanwa rinovimbisa kusazivikanwa uye kuvanzika.
Nhasi tichataura zvakawanda nezve browser iri, iyo network yeTor (Iyo Onion Router) inetiweki inoshandisa izvo zvinonzi zvinonetesa ketani, ndiko kuti, izvo pachinzvimbo chekuenda chaiko kune kwairi kuenda, data mapaketi anopfuura nepakati penzira dzakawanda munzira, inonyora meseji yega yega nematanho (saka zita racho), nenzira iyi zvinokwanisika kuvanza kuzivikanwa kwemushandisi.
Alice anotumira packet kuna Bob, asi pachinzvimbo chekuenda yakananga kuna Bob, meseji yekunyorera inoenda nemunzvimbo dzinoverengeka dzeTor uye inopedzisira yabviswa ndokupihwa kuna Bob, saka zvinonetsa kuti mumwe munhu anobva kunze azive zvakaitika. aive Alice akatuma pasuru iya
Kuti ukwanise kupinda mumambure aya, unoda Tor Browser browser, iri Mozilla Firefox-based browser. Shanduro 5.0 inounza inotevera nhau:
Firefox kugadzirisa kune vhezheni 38.2 ERS.
Fixed security bugs uye Tor network kugadzirisa.
Fixed bugs paWindows uye Mac.
Yakabatanidzwa Otomatiki Dzokorora.
Iyo Tor browser inosanganiswa seye default browser muMiswe, asi zvakare inogona kutorwa pasi kuti ishandiswe pane chero sisitimu yekushandisa, kunyangwe pamafoni eApple uchishandisa iyo OrBot app.
Pamusoro pekutsvaga kusingazivikanwe, iyo Tor network inosanganisira mapeji ayo anowanzozivikanwa se DeepWeb (yakadzika internet), ayo ari mapeji asingatsvage injini dzekutsvaga. Aya mapeji ari mune inonzi inonzi .oni domains, iyo isina kujairika uye hombe inonzi mazita ehurl nekuda kwekuvharira kwavo uye inofanirwa kutsvagwa pamurume. Aya mapeji anozivikanwa ne zvishoma zvirimo muHTML(Yeuchidzo yeInternet kubva kuma90s) uye nezvayo zvisiri pamutemo zvemukati mechikamu chikuru.
Paunopinda mukati unogona kuzviwana uine mhando dzese dzezvinhu, kubva pakutengesa zvisiri pamutemo zvombo, kutengeswa kwezvinodhaka (iyo yekare silkroad) vanofamba nevana uye maforamu ematsotsi, magwaro ehurumende epachivande kumatsotsi akabhadharwa, izvo zvakagadzira ngano zhinji dzemadhorobha paInternet nezve iyo DeepWeb inosanganisira dzinotyisa nyaya, chokwadi hachisi sekuwedzeredza sezvavanotaura. Mari yepamutemo yeTor iri bitcoin Uchishandisa yako Wallet kutenga, kana uchibvumirana, zviite panjodzi yako wega.
Taurawo izvozvo Tor pachayo haina kukanganisaSemuenzaniso, ruzivo kubva kunzvimbo yekuenda kune yekupedzisira node haina kunyorwa uye mamwe masangano senge NSA aigona kuongorora ndiani akapinda nekuongorora mavambo uye nguva dzekuenda dzemapaketi, mamwe mazano ekushandisa Tor zvakachengeteka zvinotevera.
Shandisa Miswe 1.5, sezvo iine akawanda matanho ekuchengetedza.
Kana iwe usiri kuda kushandisa Miswe, ini ndaizorega kushandisa Windows, varwisi vanogona kuteedzera makuki emamwe mabhurawuza uye vobva vaziva kuti ndiwe ani. Pane kudaro inoshandisa kugoverwa kweLinux Live yakatumirwa kuna Ram uye bvisa hard drive kubva pakombuta yako kuti iwedzere kuchengetedzwa.
Usapinda pane yako yaunogara imba router, zvirinani kune yeruzhinji network.
Kunze kweTor, wedzera imwe yekuwedzera chiyero chekuchengetedzal, mashandisiro emaseva eproxy, VPN kana kushandura kero yeMAC.
Dzima Microphone uye Webcam.
Usashandise maakaundi ako pachako paTor, seFacebook, Twiitter, Gmail ... Tor ine yayo enetiweki pasocial network uye yayo yega tsamba server uye kana iwe ukashandisa iwo aunowanzo shandisa, ivo vanozoziva kuti ndiwe ani, hongu kana hongu.
Chenjera zvaunotora, kumwe kurodha pasi kunogona kuve neXploits inoitirwa kuteedzera.
Izvi zvinofanirwa kuve pachena, asi mGara kure nevana zvinonyadzisira kana nzvimbo dzekutenga pfutiAya masayiti ndiwo anonyanya kutariswa nemasangano ehurumende.
Iyo Tor browser inogona kuve yakanaka kana iwe uchida kutarisa mune zvakavanzika zvakakwana, iyo network yeTor ine mukurumbira wakashata nekuda kwevanyengeri asi inzvimbo zvakare kune vazhinji vatori venhau kana vanhu vakaita saEdward Snowden vachinjana ruzivo vachizama kubva kure nekutarisa kwenyika zhinji. seGoogle, Facebook, Yahoo vanopa data redu kuhurumende.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Tor Browser 5.0, iro rekuvanzika browser
Ubuntu Core ichave 100% inoenderana neRaspberry Pi
Pasina kupokana Microsoft Windows 10 ndiyo yakanakisa OS